Loolanka Soomalida iyo Oromada!!! | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Bashir Maxamed — August 29, 2018
Gorfayn iyo Falanqayn Loolanka iyo Hirdanka Dhuleed, Siyaasadeed, Dhaqaaleed, Colaadeed iyo Xidhiidheed Ee Labada Qoomiyadood.
-Sooyaalka iyo taxanaha xidhiidh ee qoomiyadda Soomaalida iyo Oromadda waxa uu soo taxnaa qarniyo badan, waxaana ka dhexeeya xidhiidh kala-ganacsi, loolan dhuleed, Hirdan Siyaasadeed. loolanka qotoda dheer waxa uu ku salaysan yahay dhinacyo fara badan sida Deegaan, Ganacsi, Siyaasad, Dhaqaale iyo Dhaqan.
Loolanka dhuleed, dhaqameed, isireed iyo caqiido ee Somalida iyo Oromada waxa la hilaadiyaa inuu soo taxnaa guyaal badan. halganka iyo is-loodinta labada qoomiyadood halgankooda iyo is-hirdintoodu maalin ba meeel buu soo taagnaa, balse saacad keliya isma taagin gulufka iyo tartanku. halgankaas waxaa sal u ah dhul, caqiido, dhaqan iyo dhaqaale si looga heshiiyaana adag tahay, gaar ahaan dhulka oo qoloba marka ay gacanta sare yeelato ku talaxtegaysay, waana sababta keentay in mandaqadda Geeska Africa noqoto kob halaceedu aanu gelina gamaarin.
Marka laga hadlayo awoodaha siyaasadeed iyo kuwa dawladnimo ee ka jirra mandaqada geeska, Itoobiya waa dalka koowaad ee la tusmaysto, waa dal leh taariikh fog oo is-xigtay, Hadda wakhtigan Casriga ah hab xukunka Itoobiya waa nidaam baarlamaani ah, taliska xukuumadda waxa doorta Baarlamaanka. Bishii April 2018, Waxa ay doorteen Raysal Wasaare Cusub oo qooomiyadda Oromadda Ka soo jeeda.
RW Abiy Axmed waxa uu Saddex blood gudahood qaaday isbedelo aad u culus, isbedelo u muuqda dhuxul dambas huwan.
Qoomiyadda Hab-xukunka Itoobiya qabsataa waxa ay wakhtigeeda, xukunkeeda, cududeeda kaga faa’idaysataa meel marinate Ahdaaafteeda qoomiyadeed, siyaasadeed, dhaqaale iyo abuurista maba’aadii sii xoojinaya jiritaankeeda qoomiyadeed ee Awoodda Xukunka. Oromo oo xukunka taliska Itoobiya qabsatay , waliba rafaad badan u soo martay kuma qanci doorman wax ka yar awooddii ay Itoobiya ku maamuli jireen Tigree iyo Axmaaro.
Xeerka iyo dhaqan-xukuneedka Itoobiya u dhigan, caana ay ku tahay waa in qolada dalka qabsataa muquunisaa qoomiyadaha kale, iyadana madaxa loo ruxaa, cidii intaas ku qancin waxa ay gashaa duurka oo ay ka soo dagaalantaa. bal dib u milicso buugaag sooyaaleedka Itoobiya.
Soomaali ahaan maadaama loolan iyo tartan xanaf iyo xurguf ba leh innaga dhexeeyay waxa innagu waajiban in aynu fahano talaabooyinka Oromo Ee Hab-hogaamineed iyo Arrimaha dhaqdhaqaaq ee ay mandaqada ka wadaan, oo saamayn raad dhuleed, siyaasadeed, deegaameed, Nabadeed iyo dhaqaaleedba inagu yeelanasa. Waa in aynu indho fiiqan ku haynaa dhaqdhaqaaqyada ay waddaan kooxda Abiy Axmed. Oromadu waxa a duulaan ku tahay dhulkeena oo hodan ah dhankii la eegaba. Sinaba u yeeli mayno.
Tags: Loolanka Soomalida iyo Oromada!!!
Next post Weli Maynu Bilsan?
Previous post Waxyaabaha Bur-buriya Hal-abuurnimada Caruurta